Windows 10 မှာ backup တခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ - အပြည့်စုံဆုံး tutorial - Technology Guides | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Windows 10 တွင် backup လုပ်နည်း
Ignacio Sala | | လည်ပတ်မှုစနစ်များ, Windows ကို
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာစတင်သောအခါ၊ ဆက်စပ်သောတာဝန်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ Backup တွေကို။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံဖြင့်စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ်ဖိုင်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းများမှာအတော်လေးနိမ့်ကျနေသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပံ့ပိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုလျှင်ဖြစ်နိုင်ချေပိုများလာသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်သောအီလက်ထရောနစ်ဒြပ်စင်များဖြစ်သည် ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ရှိသောဆော့ဝဲလ် (ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ malware များ၊ ransomware များ) ကြောင့်လည်းထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကွန်ပျူတာ၏လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မိတ္တူကူးပါ။
Windows 10 အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ antivirus
1.1 အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများဖြစ်သည်
1.2 hard drive အခန်းကန့်ကိုမသုံးပါနှင့်
1.3 ပြင်ပ hard drive ကိုသုံးပါ
1.4 Cloud သိုလှောင်မှု
2 Windows 10 မှာ Backups
2.4 အခြား drive တစ်ခုသို့ back ပြန်ပါ
3 Windows 10 မှာ backup တခုကိုဘယ်လို restore လုပ်မလဲ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က, Windows ၏မိတ္တူကို install နာရီပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အရှိန်ကြောင့်သာမကတပ်ဆင်ရန်အချိန်ယူရခြင်းကြောင့်၎င်းပစ္စည်းများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအတွက်ယာဉ်မောင်းများဖြစ်သည်။
အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်နိုင်ချေကို Windows ကကမ်းလှမ်းခိုင်းတယ် အပြည့်အဝ backup လုပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဖိုင်များနှင့်အတူ၊ လက်ရှိမရရှိနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ Windows 10 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖိုင်များကိုမိတ္တူကူးရန်သာခွင့်ပြုသည်။
hard drive အခန်းကန့်ကိုမသုံးပါနှင့်
အတူတူပင် Hard Disk မှကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကန့်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် disk ယူနစ်များသာဖြစ်သည် တူညီတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိုလှောင်မှုအလတ်စားကိုအသုံးပြုပါအကယ်၍ hard disk ပျက်သွားပါကယူနစ်အားလုံးရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အချက်အလက်အားလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပြင်ပ hard drive ကိုသုံးပါ
ပြင်ပ hard drive ကိုသုံးပါ အရန်ကူးမိတ္တူများပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိရိယာသည်၎င်း၏သမာဓိကိုသက်ရောက်စေသည့်ပြproblemနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရပါကရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ မိတ္တူ၏အချက်အလက်များသည်စက်ပစ္စည်းများနှင့်ကွဲသွားသည်။
Windows 10 ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အန္တရာယ်ကင်းစွာ reset လုပ်နည်း
Cloud သိုလှောင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် OneDrive ဖြစ်သည့်မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများကိုအမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းရန်အမြန်ဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကို Windows 10 နဲ့ပေါင်းစပ်ကြောင်းဝန်ဆောင်မှု။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား cloud ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အရာအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်မပြုစေဘဲထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောဖိုင်များသာကျွန်ုပ်တို့ပြီးဆုံးသောအခါထပ်မံတင်ပို့သည်။ OneDrive သည်၎င်းကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့်မသက်ဆိုင်သောအခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ hard drive ရှိနေရာကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
မိရိုးဖလာအရန်ကူးယူထားသည့်မိတ္တူများကကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခုအတွင်းရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုအတိအကျပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အသစ်တစ်ခုကိုနှင့်အတူပစ်မှတ် drive ကိုအပေါ်ဒေတာကိုအစားထိုး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်၏မူကွဲများကိုရယူရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖျက်ခဲ့သောဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်လိုအပ်သောအခါ၎င်းသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
တိုးပွားလာသောမိတ္တူများသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုပြင်ထားသော (သို့) ကျွန်ုပ်တို့အသစ်ပြုလုပ်သောဖိုင်များကိုသာမိတ္တူကူးရန်တာဝန်ရှိသည်။ ယခင်ဗားရှင်းကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း အဟောင်းကို Backups ပေါ်မှာ။
Windows 10 မှာ Backups
Windows 10 ကကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်စရာကိရိယာတစ်ခုပေးထားတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ပေါ်ရှိအရေးအကြီးဆုံးအရာ - ဖိုင်များစာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများဖြစ်ပါစေ။ ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအဖြေသည်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီးစနစ်အတွင်းသို့ပေါင်းစပ်ထားခြင်းအပြင်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းပေးသည်။
၀ င်းဒိုးအရန်ကူးစနစ်ကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအားသာချက်များမှာထပ်ဆင့်ကူးယူခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများအသစ် backup လုပ်ထားမိတ္တူ၊ ၎င်းသည်ယခင်ဖိုင်များ၏ယခင်ဗားရှင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်သို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖျက်ခဲ့သောဖိုင်များကိုပင်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
ဒီအတွေးအခေါ်များနဲ့ Windows 10 စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နည်း
အရန်ကူးမိတ္တူများသည်နေရာများစွာမယူပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နေ့တိုင်းပြုလုပ်ပြီး၎င်းတို့လုပ်နေသော hard drive သည်ကြီးမားသည်ဆိုလျှင်အရန်ကူးစနစ်ကို configure လုပ်နိုင်သည်။ မိတ္တူအားလုံးကိုအများဆုံး2နှစ်အထိသိမ်းထားပါ။ အကယ်၍ အာကာသကုန်ဆုံးသွားပါကစနစ်အသစ်သည်အသစ်များအတွက်နေရာလွတ်ပေးရန်ရှေးအကျဆုံးမိတ္တူများကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
ဒေတာအားလုံးကို ၁ မိနစ်၊ တစ်နာရီ၊ ၁၂ နာရီတစ်ရက်တိုင်းဘယ်လောက်မကြာခဏအရန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးတယ်။ backup system ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောကောင်းကျိုးများနှင့်ကောင်းကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်သည်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Windows 1 အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမယ့်အဆင့်တွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ် Windows 10 မှာ backup တစ်ခုလုပ်ပါ.
ပထမဆုံး Windows 10 configuration options ကို keyboard shortcut Windows key + i ကနေတဆင့်လုပ်ရမယ် Update နှင့်လုံခြုံရေး။
ဤအပိုင်းအတွင်း၊ ဘယ်ဘက်ကော်လံရှိ၊ ကိုနှိပ်ပါ အရန်ကူးခြင်း။ ညာဘက်ကော်လံတွင်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Drive ထည့်ပါ ဖိုင်သမိုင်းကြောင်းပုဒ်မနှင့်အတူ Backup အတွင်း။
ထိုအခါ floating window ကိုပြသပါလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ယူနစ်တွေနဲ့အတူ စုစုပေါင်းသိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်အတူ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုတည်းကိုသာချိတ်ဆက်ထားပါကပြသထားသောတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးမည့်ယူနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင် activated switch သည်ပြလိမ့်မည် ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များကိုအလိုအလျောက်မိတ္တူကူးယူပါ။ မိတ္တူကူးရန်ရွေးချယ်စရာများကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့ကလစ်နှိပ်ပါ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများ
အောက်တွင်ကဏ္5၅ ခုပါသော ၀ င်းဒိုးအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသထားတယ် လက်ရှိ backup လုပ်ထား၏စုစုပေါင်းအရွယ်အစား။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် backup ကို configure လုပ်ထားသည်ဖြစ်ရာယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆို လုပ်၍ ၎င်း၏စုစုပေါင်းနေရာသည်0GB ဖြစ်သည်။ အရန်ကူးရန်ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်ထားသောပြင်ပ drive ၏စုစုပေါင်းသိုလှောင်မှုပမာဏကိုလည်းပြသသည်။
အတွင်းရှိဤအပိုင်းအတွင်း ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်များကိုအရန်ကူးပါကွန်ပျူတာကိုမိတ္တူကူးထားသည့်မိတ္တူတစ်ခုအကြားကြာသောအချိန်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မိရိုးဖလာအနေဖြင့်အရန်ကူးခြင်းကိုနာရီတိုင်းပြုလုပ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအောက်ပါအချိန်ဇယားများအတွက်ပြုပြင်နိုင်သည်
ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Windows 10 backup system ကကျွန်ုပ်တို့အားတိုးမြှင့်မိတ္တူများပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပြုပြင်ထားသောဖိုင်များကိုသာသိမ်းထားသောသီးခြားလွတ်လပ်သောကော်ပီများဖြစ်သည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော၊ တည်းဖြတ်ပြီးဖျက်လိုက်သောဖိုင်များ၏သမိုင်းကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပိုင်း ၁၀ တွင်ဝင်းဒိုး ၁၀ မှစီမံသောကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် အရန်ကူးခြင်းများကိုထိန်းသိမ်းပါကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်များအတွင်းဖိုင်တစ်ဖိုင်အတွင်းပြောင်းလဲမှုများအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်လိုပါကဤနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သာမန်အသုံးပြုသူများအတွက်အနည်းငယ်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် default option ဖြစ်သော်လည်းပြင်ပ hard drive ပေါ်တွင်ငွေအမြောက်အများသုံးစွဲရန်မစီစဉ်သောအိမ်သုံးသုံးစွဲသူများသည်ထို option ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ အာကာသလိုအပ်သည်အထိ။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Windows 10 သည်အဟောင်းဆုံး backup များကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည် အသစ်သောသူတို့အဘို့အခန်းတစ်ခန်းရန်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပြီး၊ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးမိတ္တူများကိုပယ်ဖျက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်နေရာအကန့်အသတ်ရှိမှသာကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးရန်စီစဉ်ထားသည်။
နောက်အခန်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြသည် ပုံမှန်ဖိုင်တွဲများ Windows 10 မှာ backup ထဲမှာပါလာလိမ့်မယ်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသောဖိုင်တွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားလိုသည့်အချက်အလက်မပါရှိပါက၎င်းကို နှိပ်၍ ဖယ်ရှားရန်ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။
ဤအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် backup ထဲကနေဖိုလ်ဒါဖယ်ထုတ်ပါ ၎င်းတို့သည်အရန်ကူးခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်ထက်အခြားဖိုင်တွဲများအတွင်း၌ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ပုံမှန်အားဖြင့် Desktop ဖိုလ်ဒါသည်အရန်ကူးခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ Desktop ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မိတ္တူတွင်မပါ ၀ င်လိုသောဖိုင်တွဲတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုဤအခန်းတွင်ထည့်ရမည်။
အခြား drive တစ်ခုသို့ back ပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ကန ဦး ရွေးချယ်ထားသည့်ယူနစ်သည်အလွန်သေးငယ်လွန်းပြီးအသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါကဤအပိုင်းကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည် ယူနစ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်ပါ။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သော drive ကိုရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါအရန်ကူးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအစမှပြန်လည်စတင်ရန်၊ မိတ္တူကူးရန် drive တစ်ခုတည်ထောင်ပြီး၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထည့်လိုသောဖိုင်တွဲများကိုရွေးချယ်ရမည်။
သက်ဆိုင်ရာစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုရွေးချယ်မှုများကဏ္ the သည်အဆင့်မြင့်သောပြင်ဆင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှခွင့်ပြုသည် ငါတို့လုပ်ထားသောအရံများအားလုံးကိုကြည့်ပါ သို့မဟုတ်အတူတူပင်အဘယျသို့, အရန်ကူးသမိုင်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ယခင်ကသီးခြားစီမဟုတ်ဘဲသီးခြားစီပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသောအရံသိမ်းဆည်းမှုမှဖိုင်များကိုပြန်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
အရန်ကူးမိတ္တူများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်း (သို့) ဖယ်ထုတ်လိုသောဖိုင်တွဲများနှင့်တစ်ပြိုင်နက်မိတ္တူများအကြားတည်ရှိသည့်အချိန်နှင့်သူတို့သိမ်းဆည်းထားမည့်အချိန်ကိုပြုပြင်ပြီးပါက ပထမ ဦး ဆုံးအရန်ကူးယူဖန်တီးပါ အကယ်လို့ hard drive (သို့) ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ရင်ဒေတာအားလုံးကိုလုံခြုံအောင်စတင်ပါမယ်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိပ်ပါ ယခုအရံသိမ်းပါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်နောက်ခံတွင်စနစ်အပေါ်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမျှမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့ကူးယူလိုသောဖိုင်များ၏စုစုပေါင်းအရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ အချိန်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောအချိန်ယူလိမ့်မည်။
Windows 10 မှာ backup တခုကိုဘယ်လို restore လုပ်မလဲ
Backup မိတ္တူပွားများကိုအလိုလျောက်ဂရုစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows 10 ကိုမိတ္တူကူးပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သိရမည် အဘယ်သို့ပြန်လာရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်သော်၊.
အရန်ကူးမိတ္တူများကိုကျွန်ုပ်တို့ယခင် FileHistory လမ်းညွှန်အတွင်း၌တည်ဆောက်ခဲ့သောယူနစ်တွင်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ backups ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအကောင့်၏အသုံးပြုသူအမည်၏လမ်းညွှန်အတွင်း၌။
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ၀ င်းဒိုး ၁၀ ကကျွန်တော်တို့ကိုတူညီတဲ့ပြင်ပ hard drive တခုခုကိုသုံးစွဲခွင့်ပေးတယ် ကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးယူလိုသောပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးကွန်ပျူတာများအားလုံးကိုအဝေးမှချိတ်ဆက်ပြီးမိတ္တူများကိုဗဟိုပြုရန်တူညီသောသိုလှောင်ရေးကိရိယာကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပါက၎င်းတို့ကိုကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်၍ ပရိုဂရမ်မလုပ်ပါ။
ထိုလမ်းညွှန်အတွင်း၌ရေတွက်ထားသောဖိုင်တွဲပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရလိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအမည် (သုံးစွဲသူအမည်နှင့်မရောထွေးစေရန်) ။ ဤဖိုလ်ဒါများအတွင်းအရန်ကူးခြင်း (ဖိုင်တွဲ) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောဖိုင်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည် ဒေတာများ)၊ ၎င်းသည် Windows 10 မှမိတ္တူများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရယူပါက၎င်းတို့အားလွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
အရန်ကူးယူသည့်အခါတိုင်း directory အသစ်တစ်ခုဖန်တီးသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းကိုမျှမဖန်တီးခဲ့ပါ၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကတည်ထောင်ထားသည့်အရန်ကူးထားသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်လမ်းညွှန်များတွင်ပါသောဖိုင်များကိုမပြင်ဆင်လျှင်၊ ၎င်းတွင်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ၏မိတ္တူတစ်ခုပါလိမ့်မည် (စာအုပ်ချုပ်သမား configuration၎င်းသည်အကြောင်းအရာများ (တိုးပွားလာသောမိတ္တူများ) ကိုပုံတူကူးယူသောကြောင့်ဖိုင်များမဟုတ်ပါ။
အရန်ကူးစနစ်ရရှိရန်နှင့်၎င်းတို့အားပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows 10 configuration (Windows key + i)၊ အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်အရန်ကူးခြင်းများ၊ အရန်ကူးခြင်းများနှင့်မှန်ကန်သောကော်လံတွင် ၀ င်ရမည်။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများနှင့် ဖိုင်များကိုလက်ရှိအရန်ကူးမှပြန်ယူပါ.
ကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးထည့်ထားသည့်ဖိုင်များအားလုံးကိုမိတ္တူကူးယူလိုပါကဝင်းဒိုးအောက်ပိုင်းရှိမြှားနှစ်ချောင်းကိုနှိပ်ရုံဖြင့်သင်၏ backup လုပ်ထားသောနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အလုပ်နှင့်ခေါ်အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ မူလတည်နေရာသို့ပြန်ထားပါ.
ဤအပိုင်း၏ပထမပိုင်းတွင်၊ အရန်များသည်အဘယ်အရာမျှမပြုလုပ်ပါ ပြင်ပ drive သို့ရွေးချယ်ထားသောလမ်းညွှန်အဖြစ်ဖိုင်များကူးယူပါမိတ္တူများကိုရက်များနှင့်နာရီအလိုက်သတ်မှတ်ခြင်း။ အဲဒီဖိုင်တွဲတွေထဲမှာမူရင်းဖိုင်တွေရှိတယ်။
ဖိုင်များကိုအခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြန်လိုလျှင်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းအားစစ်ဆေးရန်ဖိုလ်ဒါများအားလုံးကိုလည်ပတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဖိအားပေးသောကြောင့်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းတွေကဘာတွေလဲ ကူးယူသောဖိုင်များ၏။
ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် incremental မိတ္တူ၏အားနည်းချက်များကိုသို့သော်၎င်းတို့သည်မိတ္တူများ၏အချိန်နှင့်အချိန်ကိုလျှော့ချရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သူတို့၏အဓိကသီလဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မိတ္တူများဖန်တီးသည့် application ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လည်ပတ်မှုစနစ်များ » Windows 10 တွင် backup လုပ်နည်း
LibreOffice Writer ကို ၂၀၂၀ အခမဲ့ရယူပြီးမွမ်းမံနည်း
ကျွန်ုပ်၏ PC ၏ IP ကို ​​မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။